कोरोना संक्रमण उच्च जोखिममा पुगेपछि राजधानीमा लागु भयो यस्तो नियम! – PathivaraOnline
Home > समाचार > कोरोना संक्रमण उच्च जोखिममा पुगेपछि राजधानीमा लागु भयो यस्तो नियम!
admin November 8, 2020 समाचार, स्वास्थ्य	0
काठमाडौं – सरकारले कोभिड–१९को सङ्क्रमण पत्ता लगाउन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई व्यापक बनाउने भएको छ । स्थानीय तहलाई जागरुक गराई अबको एक हप्ताभित्रमा ट्रेसिङ कार्यलाई व्यापक बनाइने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ तथा कोभिड–१९ फोकल पसर्न महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।उहाँले उपत्यकाका प्रत्येक वडामा कन्ट्याक्ट टे«सिङ समूह गठन गरेर टे«सिङलाई व्यापक बनाउने जानकारी दिनुभयो ।
अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा १५ वटा कन्ट्याक्ट टे«ेसिङ समूह रहेका छन । देशभरका स्थानीय तहमा एक हजार ७५ समूहले टे«सिङ गरिहेका थिए । ४६० गाउँपालिकामा ४६०, २७६ नगरपालिकामा ५५२, ११ उपमहारपालिकामा ३३ र ६ महागरपालिकामा ३० टोली परिचालन गरिएका छन् ।
उहाँले कन्याक्ट ट्रेसिङमा परेकामध्ये पिसिआर परीक्षणका लागि शुल्क तिर्न सक्नेले शुल्क तिर्ने र नसक्नेको पिसिआर परीक्षण निःशुल्क गरिने बताउनुभयो । महाशाखाले कोभिड १९ संक्रमितसंग नजिक रहेको कममा तीन जनाको कन्टयाक्ट ट्रेसिङ गर्दै आइरहेको छ । कोभिड १९ को सङ्क्रमण फैलिन नदिई रोकथाम र नियन्त्रण गर्नकालागि सङ्क्रमित भएका व्यक्तिका नजिक रहेका तीन जनादेखि ११० जनासम्ममा ट्रेसिङ गरिएको छ । सङ्क्रमित व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष भेटेर तथा फोनबाट नजिक रहेका व्यक्तिलाई ट्रेसिङ गर्ने गरिन्छ ।
उपत्यकाका तीन जिल्लामा ८ भदौसम्म बन्द हुनेछन् यी सेवाहरू… हेर्नुस्
गोप्य रुपमा भारतीय दूतावास धाउने डिआइजीमाथि कारबाहीको तयारी